août 2012 – filazantsaramada
Ny sofintsika afaka mamantatra feo: mety feo mahafinaritra, mety feo mankadilo koa, ary misy aza feo izay tsy mba ren’ny sofin’olombelona akory toa ny « ultra son » ohatra. Ny masontsika dia mahita ny lokombonikazo kanto dia kanto ery, ny endriky ny faravodilanitra mamelona ny heritreritra ny amin’ny fahatsaran’ny asan’Andria-manitra nefa ao koa ireo zavatra mahatsiravina mampiorinkoditra […]
Publié parfilazantsaramada août 24, 2012 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra!
Avonavona, Fanetren-tena ! Toetra misy eo amin’ny olombelona ireo ! Ny zava misy anefa araka ny Soratra Masina dia « tsy misy marina na dia iray akory aza »Romana 3 :9 koa raha araka io Teny io dia tsy misy tafiditra ny lanitra ny olona rehetra! Rehetra! Soa ihany fa nisy vaha olona nomen’Andriamanitra! Ny fiaikena ny fahotana eo […]
Publié parfilazantsaramada août 17, 2012 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur
« Hatramin’izany dia maro tamin’ny mpianany no nihemotra ka tsy niara-nandeha taminy intsony. Dia hoy Jesosy tamin’ny roambinifolo lahy : Hianareo koa va mba te hiala ? Simona Petera namaly Azy hoe : Tompo ô, hankany amin’iza moa izahay ? Hianao no manana ny tenin’ny fiainana mandrakizay” (Jaona 6:66-71) Raha jerena ny tantaran’ny Finoana izay arahintsika […]
Publié parfilazantsaramada août 14, 2012 août 14, 2012 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur